Mamorona "rano mando" izy amin'ny alàlan'ny dingana iray izay mety hanova ny fambolena - Afrikhepri Fondation
Mamorona "ranon'orana vaventy" izy amin'ny alàlan'ny fomba iray izay afaka mamadika ny fambolena
Sergio Rico no mpamorona dingana iray mety hanova ny fambolena. Izy io dia misy ny fanatsarana ny fampiasana ranonorana. Nandritra ny folo taona, ny Mexique tratry ny haintany mahatsiravina any avaratry ny firenena. Sergio Rico dia nanadihady ny fomba fampiasana tsara kokoa ny orana mivatravatra amin'ireo faritra maina ireo.
"Amin'ny alàlan'ny fiasa amin'ny fanarenana ny ranonorana, hoy i Sergio Rico ao amin'ny Point.fr, dia nahita fomba hanamafisana izany hanomezana lanja iray hafa izahay. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny diapers ho an'ny zazakely aho izay mamela ny rano hiditra ao amin'ny habaka farafahakeliny ary avy tao no nahitako ny hevitra hanovana ny ranon'orana amin'ny alàlan'ny fitazonana azy amin'ny endrika molekiola ao anaty akrylate mitroka be izay mampiavaka azy. hatramin'ny 500 heny ny lanjany ao anaty rano nefa tsy manova ny firafiny simika. "
Ny ranon'orana, voaangona avy amin'ny tafo, dia alefa ao anaty tanka izay ampy handrarahana fatra 1,5 grama polyacrylate potasioma ho an'ny rano 1 litatra. Ao anatin'ny 15 minitra dia vavolombelona ny fizotran'ny fanamafisana ny rano. Ny ionisation sy ny rotsak'orana dia mitranga izay mamela ny molekiola rano hifikitra amin'ny polymers, ka miteraka rano amin'ny voamaina, amin'ny fanjakana mivaingana. Amin'ity dingana ity dia tsy ilaina ny paompy, fantsona, angovo elektrika na tanker hitaterana ilay ranoka. Ny rano matevina dia azo ampidirina anaty harona plastika izay azo tehirizina mora foana mandra-pahatongany.
Tsy misy fihenjanana ny zavamaniry
Ny polyacrylate potasioma dia mamela ny ranon-tsolika hamoaka azy ireo ary hamerina hamerina azy ireo imbetsaka araka izay tadiavinao mandritra ny valo ka hatramin'ny folo taona. Izy io dia karazana vovoka fotsy izay toa siramamy. Ho an'ny fangaro, ilay mpahay simika Meksikana, izay mahalala tsara ny fireneny, dia mampiasa ny refy fandrefesana ny satroky ny tavoahangy misy gazy karbonika, satria fantany fa ny tantsaha amin'ireo tanàna kely na vohitra kely izay nitodihana voalohany indrindra tamin'io. ny teknolojia dia tsy manana refy marina handanjalanja 1,60 grama polyacrylate.
Kapsule iray feno ny vavony no fatra ilaina hanamafisana ny rano ilain'ny zavamaniry voatabia telo. Ho an'ny tanimbary, kitapo 25 kilao dia afaka manondraka sahabo ho 1 hektara. Mba hampisehoana fa azo itokisana ny zavatra noforoniny, dia nampitahain'i Sergio Rico tao amin'ny fanjakan'ny Sonora, izay toerana mora mivoatra ny mari-pana mihoatra ny 45 degre, rafitra fanondrahana roa. Miaraka amin'ny rafitra nentim-paharazana, izay iandrasan'ny tantsaha ny fotoanan'ny orana hanondrahana ny taniny, ny katsaka dia katsaka 600 kilao isaky ny hektara. Any an-tsaha akaikin'ny trano iray, ny vokatra mitovy amin'ny orana mivaingana dia namokatra 10 taonina isaky ny hektara.
Ity rafitra fanondrahana ity, tsy toy ny hafa toa ny famafazana rano na rano mitete, dia izy irery ihany no mampiasa rano matevina. Tsy mampino ny valiny, satria ny fototr'ireo zavamaniry dia mitazona mando mandritra ny volana maromaro ary miverimberina isaky ny misy fandroana na fanondrahana kely. Ilay zavamaniry kosa etsy andaniny, tsy misy fihenjanana, satria fantany fa afaka miankina amin'ny habetsaky ny rano ilainy tsy misy fatiantoka izy io, satria tsy afa-miala ny rano mivaingana, na miditra ao anaty tany na etona. Ao amin'ny latabany, Sergio Rico dia mampiseho antsika zavamaniry maitso tsara tarehy izay tsy mbola nampisotroina rano nandritra ny 176 andro.
Tsy misy mpaminany amin'ny taniny
Sergio Rico dia nanatsara ny teknika nataony nandritra ny dimy taona. Nametraka patanty erak'izao tontolo izao tamin'ny anarana hoe "Silos de Agua". Ny teknikany dia efa nampiasaina tamin'ny fahombiazana tao India ho an'ny voankazo, voanjo, landihazo, varimbazaha ary palmie. Miaraka amin'ny rafitra nentim-paharazana, ireo fambolena ireo dia mitaky fanondrahana rano 80 litatra isan-kerinandro, amin'ny fampiasana rano mahery, 50 litatra monja isaky ny 3 volana. Fahombiazana mitovy amin'ny Kolombia, any Ekoatera, Espana ary Portugal izay anaovana ny zotram-bokatra ho an'ny voly trano fandraisam-bahiny na amin'ny fandaharanasa ala. "Ny tantsaha izay mahalala ny vidin'ny famokarana no tena liana, satria hitan'izy ireo avy hatrany ny tahirin'ny rano hataon'izy ireo amin'ny vokatray." Tena lafo ny Silos de Agua, satria 25 euro fotsiny ny harona 400 kg amin'ny iray hektara ary maharitra 10 taona.
Tombony iray hafa ihany koa ny fitaterana rano malaky, izay azo ampiharina amin'ny toerana sarotra idirana, na eo ambadiky ny ampondra na any amin'ny angidimby. Ny orinasam-pambolena meksikana lehibe dia manomboka zatra amin'ity teknolojia vaovao ity ary mihamaro hatrany ny tahirin-drano misy azy ireo raha mijanona ny orana alohan'ny fijinjana. Izy io koa dia vokatra mety tsara hampiatoana ny afo. Amin'ny alàlan'ny fametrahana rano marihitra anaty kitapo amin'ny tany, ny afo dia mifanena amin'ny hamandoana marobe izay tsy etona, mivoaka irery izy ireo nefa tsy manimba ny ain'ny mpamono afo.
Ny nofinofin'i Sergio Rico dia ny handresy lahatra ny minisitry ny fambolena meksikana hanangana hetsika fampahalalana sy fanampiana ara-teknika hahafahan'ny faritra tena tratry ny fiovan'ny toetrandro hanatsara ny fampiasana rano amin'ny orana. Te hahita ny haitao misy azy izy eo am-pelatanan'ny tantsaha Meksikana faran'izay mahantra. Mandritra izany fotoana izany dia tehaka sy diplaoma ary teny tsara ihany no mahazo azy. Voatendry ho an'ny Loka Iraisam-pirenena momba ny Rano amin'ny taona 2011 avy amin'ny Stockholm International Water Institute, Silos de Agua dia manantena ny hahazo ny loka amin'ny taona 2012. Io no ho fampiroboroboana ilaina amin'ny fampiharana manerantany.
Voafidy ho eo am-baravarankely, manome herinaratra maimaimpoana io fantsom-pifandraisana io